အသက်ရှူလမ်းကြောင်းရောဂါအတွက် ဘာတွေသိထားသင့်သလဲ - Hello Sayarwon
Dr. Hlaing Min Ko Ko မှ ရေးသားသည်။ 12/05/2020 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
Respiratory syncytial virus(RSV) သည် အလွယ်တကူ ကူးစက်နိုင်သော ဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်ပြီး ကလေး အသက် ၂ နှစ်အောက်ကလးများတွင် အသက်ရှုလမ်းကြောင်းအား ကူးစက်နိုင်ပါသည်။ ဖြစ်ရပ်တစ်ချို့တွင် RSV ကူးစက်ခြင်းမှ ပြင်းထန်သော နောက်ဆက်တွဲပြဿနာများဖြစ်သည့် လေပြွန်ရောင်ခြင်း (အဆုတ်၏ လေပြွန်ငယ်များရောင်ခြင်း) သို့မဟုတ် နမိုးနီးယားတို့ ဖြစ်တတ်ပြီး အသက်အန္တရာယ်ကို ခြိမ်းခြောက်နိုင်ပါသည်။
RSV ကူးစက်ခြင်း၏ လက္ခဏာများ
ပုံမှန်အားဖြင့် RSV ကူးစက်ခြင်း၏လက္ခဏာများမှာ အအေးမိခြင်းကဲ့သို့ ချောင်းဆိုးခြင်း၊ နှာစေးခြင်းများလို လက္ခဏာများဖြစ်သည်။ သို့သော် အအေးမိခြင်းနှင့်မတူသည်မှာ RSVB သည် နှာခေါင်းမှလည်းချောင်း ထိုမှ အသက်ရှုလမ်းကြောင်း အောက်ပိုင်းဆီသို့ အလျင်အပြန် ပျံ့နှံ့နိုင်ပြီး အဆုတ်တစ်ရှူးများကို ရောင်ရမ်းစေနိုင်ပါသည်။
RSV ကူးစက်ခံရသူအများစုသည် အအေးမိခြင်းလို ၂-၃ ရက်နှင့်မရက်ပဲ ၁၀ ထိကို ကြောက်စရာကောင်းသလိုလို ခံစားရပါသည်။ RSV ကူးစက်ခံရသော လူများတွင် အပြင်းအထန်ချောင်းဆိုးခြင်း၊ တရွှီရွှီမြည်ခြင်းတို့ဖြစ်တတ်ပြီး အောက်စီဂျင်လုံလောက်စွာရရန် ခက်ခဲ၏။
RSV သည် ကူးစက်အလွန်လွယ်ပြီး ပိုးကူးစက်ခံရသူ ချောင်းဆိုး နှာချေရမှထွက်သော တံတွေးနှပ်မှုန်များမှတစ်ဆင့် ကူးစက်နိုင်ပါသည်။ ပိုးသည် လက်နှင့် အဝတ်အစားများပေါ်တွင် ရှင်သန်နိုင်ပြီး ပိုးရှိသည့်အရာဝတ္ထုကိုကိုင်မိလျှင်လည်း ကူးစက်နိုင်ပါသည်။
RSV သည် အိမ်၊ ကျောင်းနှင့် ကလေးပြုစုရေးစင်တာများမှတစ်ဆင့် အလွယ်တကူ ပျံ့နှံ့နိုင်ပါသည်။ တစ်နှစ်သားအောက်အရွယ်များတွင် အကိုအမများကျောင်းမှသယ်လာသည့် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ကူးစက်ခံရနိုင်ပါသည်။
ကလေးသည် အသက်ကိုအားစိုက်ပြီး မြန်မြန်ရှုနေရလျှင် သို့မဟုတ် ခြေထိပ်လက်ထိပ်များ နှုတ်ခမ်းများ ပြာလာလျှင် ဆေးပညာအကူအညီကို ချက်ချင်းရယူသင့်ပါသည်။
အောက်ပါလက္ခဏာများကို မိဘများသတိထားမိလျှင်လည်း ဆရာဝန်ကိုခေါ်သင့်ပါသည်။ အဝါရောင်၊ အစိမ်းရောင်၊ မီးခိုးရောင်သလိပ်များထွက်ခြင်း၊ လှုပ်ရှားမှုသိပ်မရှိခြင်း၊ နို့မစို့ချင်ခြင်း သို့မဟုတ် ရေဓါတ်ခမ်းခြောက်သည့် လက္ခဏာများ။
RSV သည် ကလေးများတွင်သာ ဖြစ်သည်မဟုတ်ပါ။
မိဘအများစုထင်ကြသည်မှာ RSV သည် ကလေးငယ်များနှင့် လမ်းလျှောက်စအရွယ်များတွင်သာ အဖြစ်များသည်ဟု ထင်ကြသည်။ ကလေးများသည် RSV ကြောင်းဖျားနာခြင်းပိုဖြစ်လွယ်သည်ဆိုသော်လည်း ဗိုင်းရပ်စ်သည် လူကြီးများကိုပါ ထိခိုက်နိုင်၏။ အထူးသဖြင့် တခြားရောဂါအခံများရှိနေလျှင် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
အမှန်ဆိုလျှင် လူကြီးများသည် ဘဝတစ်လျှောက်လုံး ခဏခဏ RSV ပိုးကူးစက်ခံရနိုင်ပါသည်။ သို့သော် အအေးမိသလောက်သာ လက္ခဏာများပြတတ်သောကြောင့် သူတို့အတွက် သိပ်ပြဿနာမဟုတ်ပါ။
RSV ပိုးကူးစက်ခြင်းအား ကုသခြင်း
ယခုလက်ရှိတွင် RSV အတွက်တိကျသော ကုသမှု မရှိသေးပါ။ မပြင်းထန်သည့်ကိစ္စများတွင် အလွယ်တကူဝယ်ယူနိုင်သောဆေးများသည် နှာရည်ယိုခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်းနှင့် ဖျားခြင်းတို့ကို သက်သာစေနိုင်ပါသည်။ သို့သော် လုံလောက်သည့် အာဟာရနှင့် အောက်စီဂျင်ရရှိနိုင်ရန်အတွက် ဆေးရုံတက်သင့်ပါသည်။ ထိုမှသာ မြန်မြန်ကျန်းမာပြီး ဗိုင်းရပ်စ်ကို တိုက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဖွံဖြိုးဆဲနိုင်ငံများတွင် ၂၀၀,၀၀၀ သောကလေးများ RSV နှစ်စဉ် ကူးစက်ခံရပါသည်။
RSV in babies : what to know. http://www.webmd.com/parenting/baby/rsv-in-babies#1. Accessed January 16, 2017.
Respiratory syncytial virus ( RSV) Infection – cause. http://www.webmd.com/lung/tc/respiratory-syncytial-virus-rsv-infection. Accessed January 16, 2017.
6 things you should know about RSV. https://www.jnj.com/health-and-wellness/6-things-you-should-know-about-rsv. Accessed January 16, 2017.
Respiratory syncytial virus. http://kidshealth.org/en/parents/rsv.html. Accessed January 16, 2017.